Days in Bali – Kokkoya Organics
Summary of the places we visited in Bali
• In July, I had an opportunity to attend ‘Bio-intensive Growing Workshop by an expert Jodi Roebuck’ in The Kul Kul Farm, Bali. Moreover, it’s suchavaluable trip to know more about other organic farms like this – the story of it, how is it going, the market access and also community. I also hadachance to know about the climate and soil fertility in Bali which isagift of nature for Balinese so every plant can be grown easily, the Balinese culture, spirit, and food. In Bali, we visited7places in total as follow.
1. Island Organics
• An organic farm with over 50 varieties of crops cultivation hasastrong restaurant market as Bali has plenty of tourists. There are 12 staffs who are doing well in daily farm process in3acres land. One thing I impress the founder Rama is his managing skill in3acres of land without any wastes of any produces. This farm can producealot of crops with an average income of $1500 per day. Every crop harvested per day is always sold out as his motto –asuccessful farmer is who can sell everything that he grows. He also cooperates with the well-known certified organic company to build customer trust easily. We learned about his crop rotation system, nursery propagation, and his business. This farm gives us motivation to grow, harvest and sell the crops every day to get more income.
Beds in Island Organics
Discovering crops in his Greenhouse
Worm composting project
2. The Kul Kul Farm
• The Kul Kul Farm is2mins walk from Green School. It can be regarded as our dream farm as everything is systematic and organized. During the farm tour, we learned about the composting system, systematic farm tools keeping, composting toilet, greenhouse, and nursery. The bamboo architecture on this farm is very beautiful and impressive as all the buildings on the farm are built of bamboo. The farm hosts many effective workshops concerning permaculture design, bamboo building, and gardening to create beautiful and sustainable living systems. In Kul Kul farm, we attended ‘Bio-intensive Growing Workshop by Jodi Roebuck’ from which we gotalot of knowledge, time and energy-saving techniques which are very effective and efficient in implementingaprofitable farm.
• On the first day of the workshop, we learned how to beasustainable farm by doing successful micro-green, regular crop rotation and small space gardening on his farm. Next day, we learned about the importance of soil preparation and transplanting to beaproductive farm. On the last day, we got the knowledge about his marketing, useful tools in seed spacing, composting, preparing micro-green and harvesting. This 3-day workshop is very precious for us as we gotalot of ideas and solutions for our farm to increase the production of the farm. I always thank everyone who supports and give this valuable chance to attend this workshop.
The entrance of the Kul Kul Farm
Beautiful bamboo yard for guests
Individual bamboo name card
The systematic placing of farm tools
Balinese pig at the Kul Kul farm
One of the food photos from the Kul Kul farm
First day of Workshop: Lecture about how to beaprofitable farm
by Jodi Roebuck
Soil Preparation Section
Preparation of compost pile
Preparation of soil mixture for microgreen
Demonstration for growing microgreen
Plant spacing system
Sharing knowledge for harvesting
• Moksa restaurant isadestination purposely created to nourish, educate and find balance. It isaplant-based restaurant surrounded by permaculture gardens that support elements of every dish. It brings togetheraplant-based restaurant, culinary academy, permaculture gardens,adojo space for yoga, meditation, martial arts, special events, and weekly community farmers market. The food is really delicious for vegans and I recommend trying it when you are in Bali.
Beautiful garden under the restaurant
4. Mai Organics
• Nowadays, the lands in Bali are dramatically lost because of building infrastructures for hotels and restaurants for tourism. So farmers are less chance to grow food and make money form farming. People are working in the tourism industry more than any other sectors so they lost the connection with nature.
• Kaduk foundedacommunity farm with the aim of promoting both organic farming and eco-tourism in his village through farm tours and cooking classes. He also wants to createabetter connection between people and nature. One thing I learn from him is to smile while you’re preparing food for the family. ‘Smiling’ can reveal your beautiful spirit and compassion. Last but not least the villagers strongly believe in Balinese philosophy concerning with spirit and nature so they do nothing which can be harmful to their environment like reducing plastic use.
Group photo with Kaduk
The delicious Balinese food we cooked together
Fresh and Healthy Juice
Chu Chu xx
• A non-profit, private and international prekindergarten to high school in Bali. Green school protects the environment, keeps teachers and students healthy, promotes environmental literacy and trains the students to become good leaders. School fees are high to attendaregular class. But, there is one canon if you want to attend the part-time course foraweek oramonth, you have to bring 5kg of recycling materials instead of school fees. The students who are weak in theoretical learning have much fun in practical learning at Green school. The students are provided with life skills curriculum such as painting, planting, cooking, farming, building, recycling, etc………
The entrance of Green school
Information center about Green School
Many recycling projects from students
One of the bamboo classrooms at Green School
Waste managing system
Bamboo playground for kids
Fulfilling the ambitious Sustainable Development Goals
6. Emas Hitan
• Emas Hitan means golden black (soil) founded byaBalinese called Katuk. He’s got some supports from other organization, government and also his community.
• He believes in3connections which are nature, spirit, and people. One amazing thing in his farm is no need to control pest because of good soil and compost. His relatives don’t need to buy vegetables from his farm. He doesn’t have any income from veggies. But, he gets regular income from compost. The government provides three cows for manure.
The entrance of Emas Hitan farm
Two cows given by government
Compost processing room
7. Organic Farm & Cafe
• A cafe’ withasmall western organics farm is likeaschool for local farmers to learn about western organic products by Wayan and Marjan from Amsterdam in 2009. Their aim is to help increase the villagers' income in the near future by supplying western & local organics produce to hotels, villas, and restaurants. Marjan also helps local organic farmers to find restaurants market. This cafe’ offers an evening English class for children and women to get more opportunities for their future.
Sign board of Organic farm and cafe
Decoration inside the cafe
Naw Khu Pwe xx
July လမှာ The Kul Kul Farm မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ‘Biointensive workshop by Jodi Roebuck’ ကို တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တခြား Organic Farms တွေအကြောင်း၊ သူတို့ Story တွေ၊ ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Community အကြောင်းတွေ လေ့လာခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် Bali ခရီးစဉ်က တန်ဖိုးရှိတဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Bali ရဲ့ ရာသီဥတု ၊ မြေဆီလွှာကောင်းမွန်မှု တို့ကြောင့် စိုက်သမျှ အလွယ်တကူဖြစ်ထွန်းတာ ဖြစ်လို့ Balinese တွေအတွက် သဘာဝ ကပေးတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၊ Balinese ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း၊ သဘာဝကို မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြောင်းနဲ့ အစားအစာဆွေ အကြောင်း သိရှိခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Bali မှာ အောက်ဖော်ပြပါ စုစုပေါင်း7နေရာကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျိုးပေါင်း 50 ကျော်လောက် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ Organic စိုက်ခင်းတစ်ခုဟာ စားသောက်ဆိုင် ဈေးကွက် အခိုင်အမာဖြင့် ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီစိုက်ခင်းဟာ3ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ဝန်ထမ်း 12 ယောက်ဖြင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လည်ပတ်လျက်ရှိပါတယ်။ အထင်ကြီးစရာကောင်းတာ တစ်ခုက ဒီ3ဧကကျယ်တဲ့ စိုက်ခင်းမှာ ဘာတစ်ခုမှ အလေအလွင့်မရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ တည်ထောင်သူ ရာမ ရဲ့ စွမ်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိုက်ခင်းက ဟင်းသီးဟင်းရွက် များစွာကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချရင်း တစ်နေ့ဝင်ငွေ ပျှမ်းမှာ $1500 လောက်ရရှိနေပါတယ်။ သူရဲ့ဆောင်ပုဒ်က ' အောင်မြင်တဲ့ လယ်သမားတစ်ယောက်ဆိုတာ သူစိုက်ပျိုးသမျှ ပြန်ရောင်းချနိုင်ရမယ်' ဆိုတဲ့အတိုင်း သူစိုက်သမျှ ရိတ်သိမ်းသမျှ အကုန်ပြန်ရောင်းချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောင်းချရာမှာ စားသုံးသူ ယူံကြည်မှုကို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ရန် အတွက်လဲ Organic Certificates ရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီကြီးနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီ စိုက်ခင်းမှာ ကျွန်မတို့ သင်ယူခဲ့ရတာကတော့ crop rotation သီးနှံပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ပျိုးခင်း အကြောင်း နှင့် သူ့ရဲ့ စီးပွားရေး အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Farm က ကျွန်မတို့စိုက်ခင်းမှာ ဝင်ငွေတိုးဖို့အတွက် နေ့တိုင်းစိုက်ပျိူး နေ့တိုင်း ရိတ်သိမ်းပြီး ရောင်းချ နိုင်အောင် စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှု ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
2.The Kul Kul Farm
The kul kul farm က Green school ကနေဆို2မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်တာနဲ့ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ စိုက်ခင်းက ကျွန်မတို့တဲ့ အိမ်မက် စိုက်ခင်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ အရာရာတိုင်းက စနစ်ကျပြီး စည်းကမ်းရှိလှပါတယ်။ Farm ကိုလေ့လာစဉ် အချိန်မှာတော့ မြေဆွေးလုပ်ပုံလုပ်နည်း ၊ စိုက်ခင်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာတွေကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းမှု ၊ မြေဆွေး အိမ်သာ၊ greenhouse နှင့် ပျိုးခင်းတွေအကြောင်း လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီစိုက်ခင်းမှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အဦး မှန်သမျှကို ဝါးဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီး လှပသေသပ်လျက် ရှိတာကြောင့် အထင်ကြီးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီစိုက်ခင်းမှာ ဆိုရင် အနာဂတ် လှပနိုင်ရန် ရေရှည်တံ့တဲ့ နေထိုင်မှု စနစ်ကို ဖန်တီးစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် permaculture design ၊ အဆောက်အဦးများကို ဝါးနဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့ design နှင့် ဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေး များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး Workshop များပေးပို့သင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ရတာကတော့ Jodi Roebuck ရဲ့ ‘Biointensive Workshop ‘ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ workshop ကနေ အကျိုးအမြတ် ရတဲ့ စိုက်ခင်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗဟုသုတများ နဲ့ အချိန်ကုန် စွမ်းအင်ကုန် သက်သာပြီး ထိရောက်တဲ့ စိုက်ပျိူးရေး နည်းသစ် ကောင်းများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမနေ့မှာဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ micro-green လုပ်ခြင်း၊ ပုံမှန် သီးနှံပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးခြင်း နှင့် သူ့စိုက်ခင်းမှာရှိတဲ့ နေရာအသေးမှာ များစွားစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း တို့ဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မဲ့ စိုက်ခင်းတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒုတိယ နေ့မှာဆိုရင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စိုက်ခင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် မြေပြင်ခြင်း နှင့် transplanting နေရာရွှေ့ပြောင်းစိုက်ခြင်း တို့ရဲ့ အရေးပါပုံတို့ကို သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဈေးကွက်ရှာပုံ ၊ အစေ့တွေ နေရာတကျစိုက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာများ အကြောင်း၊ မြေဆွေးလုပ်ခြင်း၊ micro-green စိုက်ပျိုးခြင်း နဲ့ ရိတ်သိမ်းခြင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဗဟုသုတများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ သုံးရက်တာ workshop က ကျွန်မတို့အတွက် တန်ဖိုးရှိလှပါတယ် ဒီ workshop ကနေ ကျွန်မတို့ စိုက်ခင်းက အနာဂတ်အတွက် အသီးအရွက်များများ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွေးအခေါ်များနဲ့ အဖြေများရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ workshop ကို တက်နိုင်န်ုင်ဖို့ ကူညီ အခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Moksa စားသောက်ဆိုင်ဟာဆိုရင် အဟာရဖြစ်စေဖို့ ပညာပေးဖို့ နှင့် သဘာဝ နဲ့ ဟန်ချက်ညီ လိုက်လျောနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ထောင်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ထွက်ကုန်များကို အခြေခံထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး ဟင်းပွဲများအတွက် လိုအပ်တဲ့ အသီးအရွက်များရနိုက်ဖို့ Garden တစ်ခုဝန်းရံထားပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင် အပင်ကို အခြေခံထားတဲ့ ထွက်ကုန်များကို အသုံးပြုတဲ့ စားသောက်ဆိုင် ၊ အချက်အပြုတ် သင်တန်းကျောင်း၊ permaculture garden ၊ Yoga, meditation, material art နဲ့ အခြားပွဲတွေကျင်းပြဖို့နေရာတစ်ခု နဲ့ အပတ်စဉ် တောင်သူလယ်သမားဈေး စသည်တို့ကို တစ်နေရာထဲ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေက ကြောင့် Bali ရောက်ရင်တော့ သွားရောက်လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာဆိုရင် Bali မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ဟိုတယ်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ ဆောက်လာကြတဲ့အတွက် မြေနေရာများဟာ တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးလို့နေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် လယ်သမားတွေ အတွက် သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးပြီး ဝယ်ငွေရှာနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းလာပါတယ်။ လူတွေက တခြား ကဏ်ဍ တွေထက်စာရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် သဘာဝတရားနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ Kaduk က Organic စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးတက်စေချင်တာရယ် သူ့ကျေးရွာရဲ့ Ecotourism ကို Farm tour တွေ Cooking Class ကနေတဆင့် တိုးတက်စေချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရွာသားတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး Community Farm လေးတစ်ခု တည်ထောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူက လူတွေနဲ့ သဘာဝ ကြား ဆက်နွယ်မှုတွေ ပိုကောင်းလာစေချင်ပါတယ်။ သူ့ဆိုက သင်ခဲ့ရတာတစ်ခုကတော့ မိသားစုအတွက် အသားအသောက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာ အမြဲပြုံးနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုံးက ကိုယ် သူတို့အပေါ်ထားရှိတဲ့ လှပကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ မေတ္တတရားကို ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ အဲ့ဒီရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ ရွာသားတွေက Balinese အတွေးအခေါ်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဝိညာဉ် နဲ့ သဘာဝတရား ဆက်သွယ်မှုပို အခိုင်အမာ ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေမဲ့ အရာတွေကို မလုပ်ကြပါဘူး။
Green school သူငယ်တန်းကနေ အထက်တန်းအထိ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Green school က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ခြင်း ဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားများကို ကျန်းမားပျော်ရွှင်စေခြင်း ၊ environmental literacy ကိုအားပေးခြင်း နှင့် ကျောင်းသားတွေကို ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျောင်းစရိတ်ကတော့ အစိုးရကျောင်းများထက် ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Bali မှာရှိတဲ့ အခြားကျောင်းက ကလေးတွေအတွက် recycle လုပ်လို့ရတဲ့ အမှိုက် 5kg ကို part time ကျောင်းစရိတ်အဖြစ် တက်ရောက်နိုင်အောက် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ Theoretical learning မှာအားနည်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ green school ရောက်ရင် ဒီမှာသင်ကြားတဲ့ practical learning မှာ ပိုပျော်မွေ့ကြပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင် life skills အတွက်လိုအပ်တဲ့ သင်ရိုးများဖြစ်သော ဆေးခြယ်ခြင်း၊ အပင်စိုက်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ လယ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အဆောက်အဦးဆောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းများကို ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း စတဲ့ အတတ်ပညာများကိုလည်း ထည့်သွင်းသင်ကြားစေပါတယ်။
Emas Hitan ဆိုတာကတော့ Golden Black မြေကြီးအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ တည်ထောင်သူကတော့ Katuk ဖြစ်ပါတယ်။ သူက တခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ နှင့် သူ့ community ကပါ အထောက်အပံ့ရပါတယ်။ သူက connection3ခုဖြစ်တဲ့ သဘာဝ၊ စိတ်ဝိဉာဏ် နဲ့ လူသားတွေကြားဆက်စပ်မှုကို ယုံကြည်သူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စိုက်ခင်းမှာ အံ့သြစရာကောင်းတာက ပိုးမွှား အန္တရာယ် မရှိတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့စိုက်ခင်းမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ မြေကြီးနဲ့ မြေဆွေးရှိလို့ပါတဲ့။ သူ့ရဲ့ အမျိုးတွေက သူ့စိုက်ခင်းကနေ အသီးအနှံများကို ငွေကြေးမပေးရပဲ စားသုံးကြပါတယ်။ သူ့စိုက်ခင်းရဲ့ ဝင်ငွေက အသီးအရွက်ကမဟုတ်ပဲ မြေဆွေးကရတာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကလဲ မြေဆွေးလုပ်ဖို့ နွားသုံးကောင်ပေးထားပါတယ်။
7.Organic Farm and Café
အနောက်တိုင်း ဆန်တဲ့ Organic Farm လေးနဲ့ Cafe တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ cafe ကAmsterdam က Wayan နဲ့ Marjan နှစ်ယောက် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bali က လယ်သမားတွေ အနောက်တိုင်း ထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းကိုလဲ လေ့လာနိုင်တဲ့ ကျောင်းတစ်ခုလိုပ်ပဲ။ ဒီရွာက Farmers တွေက ဟိုတယ်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေကို အနောက်တိုင်း အသီးအရွက်ရော Bali မှာ ပေါက်တဲ့ local အသီးအရွက်ရော ထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင် ရွာသားတွေ ဝင်ငွေတိုးအောင် ကူညီပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Marjan က စားသောက်ဆိုင်ဈေးကွက် များလာအောင်လဲ ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီ cafe မှာ ရွာက အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ ကလေးတွေ အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိဖို့အတွက် ညနေပိုင်း English သင်တန်းလဲ ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။